Saabuun xumbo Bixiyaha
Kumbuyuutaha Nadiifiyaha Saabuunta Biyo-baxa
Duck xumbo qaybiyaha Saabuunta
Faa'iidooyinka iyo taxaddarrada qaybiyaha saabuunta soosaara infrared
Iyada oo ay si isdaba joog ah u sii kordheyso wacyiga bulshada ee ku saabsan jeermiska guryaha, ayaa si caqli gal ah loo adeegsadaa alaabada jeermiska lagu dilo waxay noqotay isbeddel hadda socda. Gacmuhu waa qaybaha ugu caansan ee nolosha in la taabto dhammaan noocyada noolaha ee cudurada keena, sidaa darteed muhiimadda gacmaha la dhaqdo waa is caddeyn ...
Mabda'a iyo shaqada qoriga fascia
Qoriga fascia, oo sidoo kale loo yaqaan aaladda myofascial impingement, waa qalab dhaqancelin ah oo jilicsan oo dabciya unugyada jilicsan ee jirka iyada oo loo marayo xakamaynta soo noqnoqda. Qoriga fascia waxaa loo maleyn karaa inuu yahay nooc rayid ah oo ah DMS (Electric Deep Murcle Stimulator). Vi ...
Asalka iyo adeegsiga qalabka saabuunta otomaatiga ah
Nolol maalmeedka, nadiifiye gacmeedku waa nooc ka mid ah nadiifiyaha daryeelka maqaarka kaas oo badiyaa loo isticmaalo in lagu nadiifiyo gacmaha. Qaar ka mid ah maaddooyinka gaarka ah ayaa door ka ciyaari kara jeermiska iyo nadiifinta maqaarka. Si loo fududeeyo keydinta iyo isticmaalka nadaafadda gacmaha, dadku waxay ku ridaan qalabka saabuunta lagu buuxiyo. Qalabka saabuunta caadiga ah waa ...
Cinwaanka: No. 58, Yongning Road, Yuyao, Zhejiang, Shiinaha (Dhul)